AirPods ma soo baxayaan wax soo saar ilaa Oktoobar | Wararka IPhone
Tani waa waxa ay hada ku yiraahdeen warbaahinta caanka ah ee DigiTimes sidaa darteedna lama filayo in nuxurka maanta aan ku yeelan doonno AirPods cusubIn kasta oo ay sidoo kale run tahay in sameecadahaas madaxa ah aan la filayn illaa horraanta sannadka 2020 sida ku cad xogaha ugu dambeeyay.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, kani waa waxa ay hadda noo sheegaan marka ay inyar ka yar tahay saacad oo u haray furaha taleefanka iPhone-ka si loo bilaabo, kaas oo sida ku cad ereyada Mark Gurman, loo yeedhi doonaa: iPhone 11, iPhone Pro iyo iPhone Pro Max.
Tani waxay ahayd wax caadi ah haddii aan tixgelinno in jiilka labaad ee AirPods la bilaabay waqti yar ka hor, gaar ahaan socodkii ugu dambeeyay. Daahfurka AirPods cusub maanta markii bilooyin kooban ay ka soo wareegeen cusbooneysiintiisa waa wax waalan, in kasta oo Apple aysan noqon doonin wax la yaab leh sidii aan ku aragnay dhowr sano ka hor iPads-ka saddexaad iyo afaraad. Si kastaba xaalku ha ahaadee sanadkan waxay umuuqataa inaanan arki doonin AirPods cusub mana u muuqato inay qalad tahay in la sugo ilaa Maarso 2020 jiilka soo socda.
Hada waxa inala gudboon inaan aragno ayaa ah IPhone-yada cusub, Apple Watch-ka cusub, iyo laga yaabee xitaa in dib loo habeeyay MacBook Pro inkasta oo aan sidoo kale leenahay warar xan ah suuragal 10,2-inji oo iPad ah ayaa soo muuqan kara galabtii maanta. Waxaan durbaba diyaar u nahay inaan ku siino sida ugu fiican ee suurtogalka ah ee dhacdada ee ha sameynin ha seegin hal faahfaahin oo ka mid ah adoo ka helaya maqaalkan. Saacadaha soo socda Apple wuxuu noqon doonaa erayga ugu isticmaalka badan shabakada oo dhan mana seegi kartid waxkasta oo ay noo soo bandhigaan, marka hadaad rabto waxaad nala wadaagi kartaa nuxur qaas ah oo uu iPhone-ku yahay halyeeyada ugu weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Jiilka seddexaad ee AirPods ma geli doono wax soo saar illaa Oktoobar